Manga elektrika, loko maoderina sy mahasahy ho an'ny tranonao | Bezzia
Maria vazquez | 10/01/2022 20:00 | Fironana haingo
Raha mitady loko azo omena a fanamarihana maoderina sy sahisahy ho an'ny tranonao, Aza mieritreritra intsony fa manga elektrika no lokonao. Tsy afaka milaza isika fa loko fironana toy izany Tena Peri, Ny lokon'ny Pantone amin'ny taona 2022, ratsy kokoa dia safidy tsara foana hahazoana toerana feno toetra.
Mila jiro ve ny efitranonao? Tsy hainao ny manampy toetra amin'ny efitra fatoriana fotsy tsy misy fampiasam-bola be? Raha sahy amin'ny zavatra mamirapiratra ianao, manga elektrika ho lasa mpiara-miasa lehibe izany. Azonao atao ny mandoko ny rindrina na ny varavarana amin'ity loko ity raha te hanapaka ny zava-drehetra ianao na hampiasa azy io amim-pahamalinana kokoa amin'ny fanaka kely na zavatra zavakanto. Ao amin'ny Bezzia dia mizara hevitra vitsivitsy aminao izahay anio.
Mety ho toy ny loko sarotra ny ampidirina amin'ny haingon-tranontsika, fa ny mifanohitra amin'izany; manga elektrika loko tena isan-karazany izy io ary mitambatra tsara amin'ny loko maro hafa. Loko manaitra io, izay tsy azo lavina, ary izany no maha-zava-dehibe ny mahafantatra hoe hatraiza no tiantsika hampidi-doza ny tenantsika na hatraiza ny fahasahiantsika, satria mety handreraka antsika izany rehefa mandeha ny fotoana.
Efitra fandraisam-bahiny, efitra fisakafoana ary efitra fatoriana Izy ireo dia efitrano ahafahantsika milalao amin'ity manga ity tsy misy tahotra ary nifantoka tamin'izy ireo izahay ato amin'ity lahatsoratra ity. Mila hevitra hampidirana azy amin'ny iray sy ny iray ve ianao? Amin'izao fotoana izao dia ho hitanao ao amin'ny sary voafantinay ny fitaomam-panahy rehetra ilainao hanaovana izany.
1 Ao amin'ny efitrano fisakafoana
2 Ao an-dakilasy
3 Ao amin'ny efitrano fandriana
Ao amin'ny efitrano fisakafoana
Raha jerena ireto sary manaraka ireto dia tsy isalasalana fa: ny seza izy ireo no lasa malaza indrindra safidy mba hampidirana elektrika manga ao amin`ny efitra fisakafoana. Tsy hevitra tsara ve ny mandoko na mamerina ny sezanao taloha amin'ny manga elektrika? Noho izany dia azonao atao ny manome azy ireo fiainana fanindroany ary manatratra tanjona maoderina sy feno fahasahiana ao amin'ny efitrano fisakafoanao amin'ny fotoana iray ihany.
Mitady safidy original kokoa ve ianao? Miloka amin'ny fandokoana ny clowns eo ambony latabatra amin'ity loko ity na sahy mametraka kabinetra manga eo akaikin'ny latabatra hazonao. Ary aza misalasala mandoko rindrina amin'ity loko ity raha tianao ny hanome lanja ny efitrano fisakafoana ao anatin'ny toerana lehibe toy ny lakozia na efitrano fandraisam-bahiny.
Ny efitra fandraisam-bahiny no efitra lehibe indrindra ao an-trano, izay mamela anao ho sahy amin`ny zavatra tena manaitra. Fa nahoana no tsy mandoko rindrina Sa ny varavarana ao anatiny manga elektrika? Hahagaga izany, tsy misy isalasalana izany. Ahoana raha manafina ny kabinetra fahitalavitra amin'ity rindrina miloko manga ity ianao? Hevitra mamirapiratra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny toy ny eo amin'ny sary miaraka amin'ny gorodona maizina sy rindrina ary fanaka miloko marevaka.
Sofa, seza na pouf dia safidy hafa hampidirana ity loko maoderina sy sahisahy ity ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ary azonao atao izany na inona na inona fomban'ity efitrano ity araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony. Sahisahy ny vokatra fa raha mampiasa loko neutre ho famenoana ianao dia hanamaivana ny habaka.
Asa kanto sy lamba Izy ireo dia fomba iray hafa hampidirana borosy manga nefa tsy mavesatra loatra. Ny bodofotsy amin'ny sofa amin'ny loko mena, ny vazy eo amin'ny latabatra kafe na ny printy geometrika amin'ny rindrina dia mety ho ampy ho anao.
Ao amin'ny efitrano fandriana
Headboard manga elektrika dia ho afaka hanova ny efitra fatoriana iray manontolo. Raha ny marina, io no rindrina lehibe indrindra amin'ny efitrano, izay matetika ny maso rehetra no mitodika. Te hanao risika bebe kokoa ve ianao? Hosodoko na rakotra manga ny rindrina ary asio cushion mitovy loko eo amin'ny fandriana mba hamoronana fitohizana.
Azonao atao ihany koa ny mampiditra ity manga ity amin'ny alàlan'ny lambam-pandriana, miaraka amin'ny saron-doko na plaid eo amin'ny fandrianao miakanjo fotsy. Ny fotsy dia, tsy isalasalana, iray amin'ireo loko ahafahana manambatra ny manga elektrika, fa tsy ny iray ihany; nuances kely amin'ny rehetra mena, voasary, voantsinapy na maitso, Hifanaraka tsara amin'ity iray ity izy ireo.
Tianao ve ny manga elektrika? Sahinao ve ny mampiditra azy io amin'ny haingon-tranonao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Fironana haingo » Manga elektrika, loko maoderina sy mahasahy ho an'ny tranonao